နယူးစမ်းသပ်မှုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းကိုဖေါ်ပြဖို့အသှေးကိုတစ်ခုတည်းကျဆင်းမှုကိုအသုံးပြုသည် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “နယူးစမ်းသပ်မှုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းကိုဖေါ်ပြဖို့အသှေးကိုတစ်ခုတည်းကျဆင်းမှုကိုအသုံးပြုသည်” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, ကြာသပတေးနေ့ 4th ဇွန်လရက်နေ့တွင် The Guardian ကသည် 2015 18.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဆရာဝန်တွေပိုးကူးစက်ယူဘူးသော virus များများစာရင်းကိုဖတ်ကြားဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်, သို့မဟုတ်ကူးစက်ဆက်လက်, သူတို့ဆိုသိသာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေမလာကြလျှင်ပင်လူနာ.
အဆိုပါနည်းပညာကိုထှထှေကေုလူကူးစက်နိုင်စွမ်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်လူအပေါင်းတို့ကိုလူနာပြနိုင်ကြောင်းကိုဆိုလို. ထိုကဲ့သို့သောအသည်းရောင်အသားဝါ C နှင့် HIV ပိုးအဖြစ်အလေးအနက်ကူးစက်မှု၏ထောက်လှမ်းအသွင်ပြောင်းနိုင်, အရာလူမသိဘဲအနှစ်သယ်ဆောင်နိုင်.
"ပုံမှန်အားဖြင့်, ဆရာဝန်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံမယ်လျှင်သိရန်လိုလားကြသောအခါ, သူတို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်အဘယ်သို့မှခန့်မှန်းရန်ရှိ, ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်အထူးသဖြင့်ကြည့်ရှု,"စတီဖင် Elledge ကပြောပါတယ်, ဘရစ်ဂ်ဟမ်နဲ့ဘော့စတွန်အမျိုးသမီးဆေးရုံမှာစီမံကိန်းကိုဦးဆောင်ခဲ့သူ.
လူတို့သည်မိမိတို့ဆရာဝန်မှနှစ်စဉ်သွားနှင့်၎င်းတို့၏ဗိုင်းရပ်စ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောတွေရှိရာ "ဒီတစ် diagnostic ဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်း. ဒါဟာဆက်ဆက်အလေးအနက်ဖြစ်ကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်နှင့်လူနာသူတို့ခဲ့မသိကြောင်း,"ဟုသူကဆိုသည်.
အဆိုပါ (စတာလင်ပေါင် 16) စမ်းသပ်မှုထက်ပိုမိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ synthetic ဇီဝဗေဒနှင့်လျင်မြန်စွာမျိုးရိုးဗီဇအစီအစဉ်အတွက်တိုးတက်မှုတွေအပေါ်ဆွဲယူ 1000 pass တခုအတွင်းလူ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ. အခုချိန်အထိ, အများဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ကြိမ်မှာတစ်ခုတည်းသာရှိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ကြည့်ရှုကြ. Elledge နောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ်ကခန့်မှန်းထားသည်, VirScan ဟုခေါ်, process နိုင် 100 နှစ်ဦးသုံးဦးမှနေ့ရက်ကာလ၌နမူနာ.
Related: WHO ကအီဘိုလာရောဂါသည် 15 မိနစ်ကြာစမ်းသပ်အတည်ပြု
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဖြင့်ရောဂါပြီးစနစ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရောဂါကူးစက်လာသည်အခါတိုင်းပဋိပစ္စည်းများ virus များကိုတိုက်စေသည်ဟူသောအချက်ကိုအဖွဲ့တို့. ဤရွေ့ကားပဋိပစ္စည်းများနှစ်နှင့်ပင်ဆယ်စုနှစ်များအတွက်သွေးကြောထဲမှာပေါ်အသက်ရှင်နိုင်.
စမ်းသပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်, Elledge သူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်လူ့ virus များထံမှပရိုတိန်းဓာတ်၏-bits သယ်ဆောင်ရန်အန္တရာယ်ဗိုင်းရပ်စ်သုတ် ခွဲ. အင်ဂျင်နီယာ. စုစုပေါင်း, သူတို့ထက် သာ. ထံမှပရိုတိန်းဓာတ်ကိုသယ်ဆောင် 1000 ၏မျိုးကွဲ 206 လူကူးစက်ဖို့လူသိများဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုး. antibodies ကျူးကျော် virus များအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်၎င်းတို့၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုစတင်ဤပရိုတိန်းအပိုင်းအစများကိုသုံး.
လူနာထံမှအသွေးစက်များပြုပြင်ထားသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ရောထွေးဖြစ်တဲ့အခါ, မည်သည့်ပဋိပစ္စည်းများသူတို့ကျူးကျော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်လူ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပရိုတိန်းမှပေါ်ပေါက်အပါပြီ. သိပ္ပံပညာရှင်ထို့နောက်ပဋိပစ္စည်းများထွက်ဆွဲခြင်းနှင့်သူတို့ကိုင်စွဲထားသောပရိုတိန်းအပိုင်းအစများအနေဖြင့်လူ့ virus များခွဲခြားသတ်မှတ်.
"ဒါဟာကျွန်တော်လူကူးစက်ဘာ virus များမှာလုံးဝဘက်မလိုက်ထုံးစံအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်, ကျနော်တို့အားလုံးသိကြ virus များကြောင့်လုပ်နိုင်,"Elledge ကပြောပါတယ်. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကနေထုတ်လုပ်နေပဋိပစ္စည်းများကိုယူလိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒီစမ်းသပ်မှုရလဒ်များအထဲကနေဖြုတ်နိုင်ပါတယ်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂျာနယ်တွင်အစီရင်ခံကြသည် သိပ္ပံ.
နည်းပညာ၏ဆန္ဒပြပွဲအတွက်, အဖွဲ့ထံမှအသှေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 569 US မှာကလူ, တောင်အာဖရိက, ထိုင်းနှင့်ပီရူး. အဆိုပါစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့, ပျမ်းမျှအားဖြင့်, လူတို့နှင့်အတူပိုးကူးစက်ခဲ့ 10 ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်, တရားခွင်မှာအတွက်အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦး၏သမိုင်းများရှိခဲ့သော်လည်း 84 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကနေရောဂါကူးစက်မှု.
အသုံးအများဆုံးကူးစက်မှု herpes ရေယုံဗိုင်းရပ်စ်များဖြစ်ကြသည်, အအေးအနာစိမ်းစေရာ, အစာအိမ်ကမောက်ကမဖြစ်စေကြောင်း enteroviruses, တုတျကှေးနာ, နှင့်ဘုံအအေးမိဖြစ်ပေါ်ကြောင်း rhinoviruses. US မှာသူများသည်အခြားနိုင်ငံများရှိသူတို့အားထက်နည်းပါးကူ​​းစက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့, နှင့်အမျှမျှော်လင့်ထား, သက်ကြီးရွယ်အိုလူငယ်ထက်ပိုပြီးချမ်းသာဗိုင်းရပ်စ်သမိုင်းနဲ့ခဲ့.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအစားထိုးလူနာတွေအတွက်အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ကြဉ်းနိုင်. အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသလိုကျလြှောကျနိုငျသောသူတယောပြဿနာမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ်၏အနှစျခြု နှစ်ပေါင်းလူနာသို့မဟုတ်အလှူရှင်အတွက်လှုပျမရှား lurked ကြပြီ. လူနာရဲ့ခုခံအားစနစ်ကကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုမငြင်းဆန်သူတို့အားကာကွယ်တားဆီးဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖိနှိပ်ခံသောအခါ, ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအင်အားသုံးပြန်နိုင်. စံစမ်းသပ်ချက်မကြာခဏခွဲစိတ်မီငုပ် virus များကောက်ရန်ပျက်ကွက်, ဒါပေမယ့် VirScan လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအန္တရာယ်မှသူတို့ရဲ့ရှေ့တော်နှင့်တပ်လှန်ဆရာဝန်များနှင့်လူနာထုတ်ဖေါ်နိုင်တယ်.
"ဒါဟာအရမ်းအဖိုးတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်,"Said Iwijn De Vlaminck, New York မှာကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်က biomedical အင်ဂျင်နီယာ, လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သောသူမဟုတ်ခဲ့. "ဘာကိုဤသင်တို့ပြုခွင့်ပြုအတိတ်သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ယခင်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ထိတွေ့မှုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်. ဒါကအရေးကြီးသောအားသာချက်ရှိပါတယ်, သင်ရှာဖွေပေးပို့ရန်သွားရသောဤကူးစက်ရောဂါ detect နိုင်သောကြောင့်,. သင်သည်ဤသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ထုံးစံရှိလူနာများနှင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအလှူရှင်များထံမှအသှေးကိုမျက်နှာပြင်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ် reactivity နှင့်အတူအလားအလာအနာဂတ်ကိစ္စများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ "
သိပ္ပံပညာရှင်များစမ်းသပ်စသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအမြင်မသက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌လူတွေ predispose နိုင်ပုံကိုအချို့အပေါ်အလင်းန့်ပစ်မည်ဟုယုံကြည်. အချို့ကရောဂါကူးစက်မှုခန္ဓာကိုယ်တစ်ရှူးမှရာသက်ပန်ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ပြောင်းလဲ, သူတို့အသက်ကြီးလာသောအခါဆေးပညာပြဿနာများ၏အန္တရာယ်မှာပိုမိုလူချန်မထားနည်းလမ်းတွေနဲ့. ဥပမာအားဖြင့်, Epstein-ဘားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူရောဂါကူးစက်မှုကင်ဆာအန္တရာယ်မြှင်နိုင်. ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအခြား virus များရေရှည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေဝေး murkier ဖြစ်ပါသည်. "ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျိုးကဒီကယ့်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှစေသည်တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်,"Elledge ကပြောပါတယ်.
24414	0 AIDS ရောဂါနှင့် HIV, အပိုဒ်, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်မော်လီကျူးဆိုင်ရာဇီဝဗေဒ, ဇီဝဗေဒ, အသည်းရောင် C ကို, မှ Ian နမူနာ, ရောဂါပြီးပညာ, အဓိကအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← ဘယ်လိုသင့်ရဲ့မျက်စိသည်သင်တို့၏အကြံအစည်အပ်နှံ အနောက်ဘက်တွင်ထိပ်ဆုံးလေးခေတ်မီလူသတ်သမား →